Nitin Lahoti si na Martech Zone |
Edemede site na Nitin Lahoti
Nitin bu onye nchoputa Mobisoft Infotech, ulo oru Digital Solution. Ndị mmekọ Mobisoft Infotech na azụmaahịa nke nha niile iji wuo, melite ma bulie ngwaahịa n'ofe nyiwe na-eme ka teknụzụ na-emebi ma jikọta imewe, injinia na ihe ọhụrụ iji mee ka ndị ahịa anyị nwee ọganiihu.
Tọzdee, Nọvemba 22, 2018 Nitin Lahoti
Dika usoro ihe eji eme ka ihe di ala na-ebelata oge mmepe ma kwusi ugwo mmepe, ngwa mkpanaka na-aburiri ihe otutu ulo oru ghagharia ohuru. Iwulite ngwa nke aka gi adighi onu ahia ma burukwa ihe dika odi otutu afo gara aga. Fueling the industry bụ ngwa mmepe ụlọ ọrụ na dị iche iche ọpụrụiche center na asambodo, niile ike ike na-ewu azụmahịa ngwa nwere ike ghaghị mmetụta akụkụ nile nke azụmahịa gị. Etu eji eji egwu egwu